Raw Proviron (Mesterolone) ee dhiska jidhka, qiyaasta, iyo wareegga
/blog/Gallery/Raw Proviron (Mesterolone) ee dhiska jidhka, qiyaasta, iyo wareegga
Posted on 01 / 25 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
1. Waa maxay Raw Proviron (Mesterolone)?
2. Proviron Ceyriin (Mesterolone) Tilmaamaha Kiimikada
3. Ceyriin Proviron (Mesterolone) faa'iidooyinka ee bodybuilding (Maxay Proviron sameeyo?)
4. qiyaasta Proviron (Mesterolone) ceeriin
5. Ceyriin Proviron (mesterolone) wareegga
6. Raw Proviron(mesterolone) Saamaynta Dhinacyada
7. Proviron ma sharcibaa?
8. Mesterolone iibka online
9. Sida loo iibsado Proviron
10. dib u eegista Proviron
11. Aqoonsiga Proviron
12. Sawirada Natiijooyinka Proviron
Waa maxay Proviron Raw (Mesterolone)?
Raw mesterolone waa budada kareemka, cadaan ah oo huruud ah oo aan ku milmin biyaha. Waxaa badanaa loo yaqaanaa magaca sumadda, Proviron. Kiniin kasta / kiniin Proviron ah waxaa ku jira qiyaastii 25mg budada mastarro ceeriin ahMarka loo eego qiyaasaha kale ee steroids, Mastarro qaydh ayaa ku jira wax aad u tabar daran ama xitaa waxqabadka anabolic. Sababtan awgeed, looma gudbiyo a steroid anabolic. Waxaa lagu maamulaa afka si aaney u jirin cirbad mastoolone ah.
Schering waxa uu horumariyay Mesterolone sanadkii 1934. Waxa lagu qiimeeyay ka mid ah steroids-yada ugu da'da weyn ee la isticmaalo oo ay weheliyaan Methyltestosterone iyo Testosterone Propionate kuwaas oo la sameeyay loona isticmaalay daawada 1935 iyo 1937 siday u kala horreeyaan. Testosterone propionate iyo Methyltestosterone ayaa aad loo yaqaan sababtoo ah dhaqdhaqaaqooda xooggan ee anabolic. Proviron waxaa loo tixgeliyey inuu yahay steroid daciif ah sidaas darteed caannimadiisa ma aysan badin marka la barbardhigo labada steroids ee kale.
Sida ugu badan ee Mesterolone (Proviron) loo tixgeliyo daroogada hore, waxay astaamaha wanaagsani weli taagan yihiin ilaa taariikhda. Waa daawo aad ufiican oo ku saabsan dulqaadashada dadka isticmaala iyo amniga. Meelaha caafimaadka, Mesterolone (1424-00-6) waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo raaxo la'aanta hooseysa ragga da'da ah ee ku dhacaya xanuunka lido, infertility iyo heerarka hooseeya ee hooseeya. Waa mid ka mid ah steroids anabolic afka ugu fiican.
Daawada, mesterolone (Proviron) waxaa badanaa loo isticmaalay in lagu saxo madhalaysnimada. Halka steroids kale ama androgenic ama anabolic ay xakameyso gonadotropins endogenous taasoo keenta dhalmo la'aan ku meel gaar ah, Proviron, marka loo isticmaalo qiyaasta caadiga ah saameyn kuma yeelan doonto heerarka LH ee jirka. Si kastaba ha noqotee, way fiicantahay in Proviron uusan kor u qaadin heerarka LH sida dadka qaar ay u muuqdaan inay aaminsan yihiin. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, Mesterolone wuxuu xoojiyaa spermatogenesis ee tijaabooyinka iyada oo la siinayo saamaynta androgenic ee loogu baahan yahay hawshan.
Daawada 'Proviron steroid' waa mid u gaar ah habkeeda laakiin waxay wadaagaan sifooyinka qaarkood Winstrol, Masteron iyo Anavar. Waxqabadka caqliga leh, Mesterolone looma adeegsan si kor loogu qaado kobcinta murqaha. Si kastaba ha noqotee, waxay ka ciyaartaa door muhiim ah inta lagu jiro wareegyada bulking. Isticmaalkeedu wuxuu ku habboon yahay goynta wareegyada, in kastoo, shaqadeedu sidoo kale ay tahay mid ku gaar ah wejigan.
Schering ayaa hadda soo saarta Mesterolone hoosta magaca caanka, Proviron, adduunka oo dhan. Waxaa lagu iibiyaa iyadoo la adeegsanayo magacyo kala duwan, tusaale ahaan, Asche iyo Jenepharm ee Jarmalka ka iibiya Pluriviron iyo Vistimon. Brown iyo Burke ee Hindiya waxay ku iibiyaan magaca Restore. Nasiib daro, Proviron marnaba lama aqbalin daroogada daawada ee Maraykanka
Raw Proviron (Mesterolone) Astaamaha Kiimikada
Mesterolone waa nooc ka mid ah Dihydrotestestone deris ah oo la beddelo iyada oo lagu darayo koox methyl, 1-methyl-dihydrotestosterone, oo ku jirta 1st kaarboonka Sababtan daraadeed, daawadani kuma dhacayso qalalaasaha cayayaanka sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa afka. Waxaa ka mid ah steroids anabolic afka, Proviron waa mid ka mid ah iyada oo aan lahayn C17-alpha alkylated laakiin halkii waxay qaadanaysaa methyl group. Afku Primobolan waxay hoos timaadaa isla qaybta sida Proviron ku saabsan methyl group. C17-aa steroids afka ayaa leh bioavailability ka sarreeya Proviron. Tani waxay saameyn ku yeelatay sumcaddii Proviron ee ka mid ah waxqabadka jirka ee horumarinta jirka.
Marka la barbardhigo testosterone, Mesterolone wuxuu xambaarsan yahay qiimeyn anabolic iyo androgenic ah 100-150 iyo 30-40 siday u kala horreeyaan. Qiimeynta testosterone ee 100 qayb kasta. Xitaa iyada oo leh qiimeyn sare oo anabolic ah, Mesterolone wuxuu soo bandhigayaa waxqabadyo yar oo anabolic ka badan testosterone. Kiis isku mid ah ayaa loo aadayaa Halotestin kaas oo loo yaqaan 'anabolic anabolic rating' laakiin dhaqdhaqaaqa hooseeya ee anabolic. Qiimeynta 'Proviron' androgenic ayaa mararka qaar ka hooseysa heerarka dhaqdhaqaaqa androgenic.
Sida kor ku xusan, daawadani waxay muujinaysaa sifooyinka aan muhiimka ahayn ee anabolic sida badanaa loo yaqaan 'steroids' iyo 'estrogenic steroid'. Sida DHT, oo ah rugta waalidka, Proviron waa la burburiyaa isla markaana metabolized si dhakhso ah u sameeya unugyada firfircoon ee aan firfircooneyn isla markaaba unugyada murqaha ayaa nuugaya. Tani waa sababta ugu weyn ee ay u leedahay hawlaha anabolic oo daciif ah.
Xannuunta 3-hydroxysteroid dehydrogenase, kaas oo si xoog leh ugu urursan unugyada muruqa, waxay ku xidhan yihiin dihydrotestosterone waxayna u badashaa isku-dhafka oo leh saamiyo anabolic. Proviron, sidaas darteed, wuxuu noqonayaa steroid anabolic aad u daciif ah. Doodaha kuwa dhexdhexaadiyeyaasha ah waxay leeyihiin in Proviner baararro yaryar oo hindhiso ah oo laga helo unugyada muruqyada sidaas daraadeed waxqabadyada anabolic ayaa daciif ah. Caqli ahaan, tani ma aha kiiska.
Mesterolone wuxuu leeyahay muuqaal aad u fiican oo loogu talagalay Xinjirowga Xinjirta (Globulin), oo ah borotiinka oo isku xira stobaabin anabolic, sida testosterone, iyaga oo aan firfircoonayn. Marka Proviron lala isticmaalo steroids kale, waxay kordhisaa saameynta iyo waxqabadka steroids anabolic iyada oo loo marayo habkan. Ugu dambeyntii, testosterone dheeraad ah waa bilaash si ay u fuliyaan shaqadooda jirka.
Proviron wuu la falgalaa enzme-baddalka testosterone-ka ee estrogen, oo loo yaqaanno enzyme aromatase. Cudurka steroid wuxuu caqabad ku hayaa firfircoonida aromatase adoo iskood u gelinaya enzyme aromaticase sidaas darteed ka hortagga saameynta estrogenic. Dhibaatooyinka anti-estrogenic waxaa laga yaabaa inaanay awood u lahayn sida kuwa Aromatase Inhibitor, laakiin saameyntu waa mid muhiim ah. Heerarku waxay ku xiran yihiin nooca wareegga jirka ee dhismaha jirka.
Raw Proviron (Mesterolone) faa'iidooyinka ee bodybuilding (Maxay Proviron sameeyo?)
Proviron ma aha steroidska ugu muhiimsan ee loo isticmaalo jirka jirka inta lagu jiro wareegyada wareega. Qaarkoodna xitaa ma isticmaali doonaan goorta wareegga. Si kastaba ha noqotee, oo ay ku jiraan Proviron ee xargaha, waxay ka caawisaa jirdhiska jirka ka soo horjeeda marxalad taagan oo ay weheliso marxaladda xajmiga. Horumarka waxaa laga yaabaa inuu bilaabmo wanaaga iyo marmarka qaarkood marxaladaha qaarkood inta lagu jiro wareegga inta badan shakhsiyaadka. Proviron waxay noqon doontaa mid faa'iido badan marka la eego iyada oo xoojinaysa xoriyada siyaabaha kale ee steroids ee ku jira xargaha sidaas daraadeed waxay sare u qaadeysaa heerkooda dhaqdhaqaaqa.
Dhismayaasha tartan ee tartanka waxay isticmaalaan qiyaaso badan oo tijaabo ah inta lagu gudajiro wareegga jarista, laakiin inta badan, qiyaasta ayaa yareysa inta lagu jiro marxaladan marka la barbardhigo wareegga xilli-ciyaareedka. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala qaarkood waxay doortaan in ay qaadaan xaddi xadidan oo ah testosterone goorta xilliga gu'ga sababo shakhsiyeed dartood. Mesterolone wuxuu u adeegsanayaa xaalad noocaas oo kale ah maadaama uu siinayo kor u kaca iyo korriinka loo baahan yahay. Tani waxay noqon kartaa mid aan loo baahnayn, laakiin aad bay faa'iido u leedahay.
Lacagta miisaanka jarista
Raw Mesterolone waxaa ugu wanaagsan ee loo isticmaalo, jir-dhiseyaasha, inta lagu jiro wareegga goynta. Inta lagu jiro marxaladdan, waxay soo bandhigeysaa muuqaalo adag oo la mid ah kuwa Masteron. In kastoo, faa iidada ugu badan ee ay leedahay ay tahay awoodda ay u leedahay inay kor u qaaddo waxqabadka adkaanta ee steroids kale ee ku jira xargaha. Proviron waxay si adag ugu xidhan tahay soo-dhawraha androgen-ka kaas oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu gubo dufanka jirka si dhakhso ah oo waxtar leh. Iyadoo la tixgelinayo saameynta anti-estrogenic ee Proviron, dadka isticmaala waxay la kulmi doonaan haynta ugu yar ee biyaha, iyo laga yaabee, ma jiri doonto baahi loo qabo in lagu daro anti-estrogen dhaqameed ee xargaha. Sidoo kale, Proviron wuxuu kordhiyaa tirada testosterone bilaashka ah. Tani waa wax badan oo caawimaad ah tan iyo heerarka testosterone guud ahaan way hooseeyaan inta lagu jiro muddadan isticmaalka steroid anabolic. Natiijooyinku way ka sarrayn doonaan shakhsiyaadka ku jira Proviron marka ay qaadanayaan qiyaasaha testosterone ee hooseeya marka la barbar dhigo kuwa isticmaala ee aan samayn. Marka la soo koobo, faa'iidada weyn ee mesterolone inta lagu jiro wareegga goynta ayaa ah awooda ay u leedahay inay hagaajiso istrogenic of steroids kale oo lagu daro xargaha iyada oo ujeedadu tahay adkeynta jirka. Saamaynta Qiyaasta daawada Proviron waxaa kaliya oo la ogaan karaa haddii isticmaalaha uu ku tiirsan yahay.
Sida hore looga dooday, Mesterolone (Proviron) waa nooc ka mid ah DHT. Tani waxay ka dhigan tahay in adeegsigiisu uusan keenin wax saameyn ah oogada. Marka la barbardhigo kiniiniyada kale ee ka hortagga-estrogen, tusaale ahaan, Nolvadex, Proviron inkasta oo aan aad u xoog badnayn, waa fayo-dhawr daaweyn oo loo yaqaan 'estrogen inhibitor'. Si aad u cadeeysid, Proviron waxay caqabad ku tahay soo saarida estrogen inta ay kiniinada kale xakameynayaan estrogen horay loo soo saaray jirka. Jimicsiga jirka ee xasaasiyad ku leh estrogen waa inuu isticmaalaa Proviron oo weheliyo steroids kale. Dhibaatooyinka 'Estrogenic' ee uu keeno steroids kale waxaa fududeeyay Proviron marka lagu daro xargaha. Iyada oo ay sabab u tahay muuqaal-ka-hormarinta xayawaanka, Proviron waxaa hadda loo isticmaalaa daaweynta si loo daaweeyo kansarka naaska iyo ginecomastia.
Sterioid Proviron, sida kuwa kale DHT derivative, wuxuu door muhiim ah ka qaataa luminta jidhka. Waxay kor u qaadeysaa burburinta kaydka dufanka ee lagu keydiyo jirka oo loo beddelo tamar loo isticmaalo hawlaha maalintii. Hase yeeshee, heerarka lipid ee jidhka waa la dhimay. Hoos udhaca heerarka lipid waxaa keena heerarka kor u kaca iyo quudin ee ay keento isticmaalka Proviron. Tani waa sababta Mesterolone uu yahay mid aad waxtar u leh inta lagu jiro wareegista wareegyada.
Wuxuu joojiyaa aromatisation
Isticmaalka isteeroydhiska wuxuu noqon karaa mid aad u cabsi badan gaar ahaan marka dadka isticmaala ay tahay inay la macaamilaan aromatisation iyo saameynta soo socota. Tani waa nidaam testosterone oo jirka ku jirta ama tan lagu maamulo steroids loo beddelo estrogen. Saamaynta soo socota waxaa ka mid ah haynta biyaha, miisaanka oo kordha, ginecomastia, isbeddellada hormoonnada iyo kuwa kale. Estrogen waxay sidoo kale kicisaa soo saarida hormoonka diiqada ee anti-anabolic, oo loo yaqaan 'cortisol'.
Warka fiicani waa in Proviron uusan aromatise. Waxay caqabad ku tahay geeddi-socodka khatarta ah adoo isku xiraya enzimada oo kor u qaadaya aromatisation. Sidaa daraadeed Proviron waxay ka hortagtaa dhaqdhaqaaqyada estrogenic sidaa daraadeed waxay bixisaa difaac ka soo horjeeda waxyeelooyinka ay keento hawlahaas.
Waxay hagaajisaa waxqabadka steroids kale
Si loo gaaro natiijooyinka ugu badan, jir-dhisayaashu waxay isdaba-mariyaan steroids dhiska iyo androgenic leh Proviron steroid. Marka hore, sidaan hore u soo sheegnay, waxay xannibeysaa waxyeelada estrogenic. Marka labaad, Proviron wuxuu ciyaaraa doorka dhiirrigelinta steroids kale oo ka dhigaya kuwo wax ku ool ah. Way samayn kartaa tan iyo markii ay isku xirto qabtayaasha androgen ee nidaamka jirka. Waqtiga dheer, dhammaan steroids oo lagu daro xargaha ayaa noqda kuwo firfircoon. Tusaale ahaan markii la wada isticmaalo Anavar ama Iskoolka Steroid.
Waxay yareysaa hormoonka galmada xirmo globulin (SHBG)
Gowracatada jinsiga ee globulin ayaa xireysa testosterone la heli karo jirka oo yareynaya tirada testosterone bilaash ah. Proviron wuxuu leeyahay xajin sare u leh hoormoonkan, sidaa daraadeed wuxuu hoos u dhigayaa, taasoo keentay in tirada sii kordheysa ee testosterone lacag la'aan ah. Testosterone bilaash ah ayaa kor u qaadeysa murqaha inta lagu jiro dillaaca iyo jarista wareegyada. Shakhsiyaadka ku jira Proviron ee xargooda wareega waxay si aad ah ugu raaxaysanayaan natiijooyin wanaagsan.
Cillada dhalmo la'aanta
Mesterolone 1424-00-6 waa daawo sax ah oo loogu talagalay bacriminta labka ama xaalada dhalmo la'aanta. Xaaladaha badankood, dhibaatadan waxaa keena heerarka wax soo saarka shahwada oo yaraaday. In kasta oo faahfaahinta la xiriirta dhalmo la’aanta iyo taranka ragga aysan aad u caddeyn, haddana waxaa la rumeysan yahay in soosaarida shahwada ay ku tiirsan tahay gonadotrophins iyo androgens, tusaale ahaan, testosterone. Hormoonadan ayaa mas'uul ka ah kicinta xubnaha galmada. Proviron, dhanka kale, wuxuu kiciyaa androgens laakiin ma saameynayso gonadotrophins. Tani waxay u tarjumaysaa qanacsanaanta tirakoobka shahwada Proviron ee kobcinta taranka.
Dhamaan diyaarinta tartanka
Proviron waa saaxiibka ugu fiican marka la diyaarinayo tartan. Waxay ku caawinaysaa sidii loo sii wadi lahaa xoogga, kor u qaadida aragtida murqaha iyo ilaalinta murqaha inta lagu jiro xilliga diyaarinta tartanka. Jidh-dhiska tirade badani waxay u adeegsadeen Proviron si loo yareeyo uguna gooyo maaddaama ay kor u qaadayso heerarka xajmiga iyo waliba hoos u dhigidda heerarka estrogen. Waqtiga dheer, dadka isticmaala waxay ku raaxaystaan ​​manfacyada faa'iidooyinka leh sida korantada ugu badan ee korantada iyo saamaynta gubashada dufanka iyadoo yaraynta haynta biyaha.
Sida horay looga dooday, Proviron waxay kobcinaysaa testosterone. Soo noqoshada, testosterone waxay naaquseysaa calaamadaha maqnaashaha, oo sidoo kale loo yaqaana, cillad aan caadi ahayn. Waxa kale oo ay si weyn u kordhisaa libido; Tani waxay sabab u tahay mid kasta jirka si loogu daro xargaha.
Ma jiro cirbad mastoole ah
Fikradda ah isticmaalka irbadda maqaarka waxay ka niyad-jebin kartaa jidh-dhisayaasha isticmaalka steroid. Nasiib wanaag, Proviron waxaa loo qaataa afka, si la mid ah sida aad u qaadan karto xanuun joojiye. Haddii aad tahay nooca cirbadaha la neceb yahay, markaa Proviron waa inay noqotaa mid aad doorbido inaadan ilaawin faa'iidada kale ee jirka ee ay bixiso.
Lacagta lidka ku ah diiqadda
Mid ka mid ah baadhitaanada caafimaad ee lagu sameeyay mastarro ayaa tilmaamey in steroidkani uu ku fiicnaan karo xaaladda maskaxeed ee dadka isticmaala qaar ka mid ah murugada. Tani waxay soo jiidatay isticmaalka isticmaalka shakhsiyaadka qaba xaaladan. Caqli ahaan, natiijooyinka baaritaanku ma dhicin tan iyo markii la arkay kormeer la mid ah kooxda xakamaynta placebo. Proviron waxay leedahay saameyn heer sare ah oo istratijiyadeed sidaas darteed waxay kordhin kartaa dheellitirka hormoon la'aanta iyo waxqabadka galmada ragga. Taas bedelkeeda, Proviron waxay hagaajisaa dareenka wanaaga, kalsoonida iyo kobcinta niyadda wanaagsan ee wanaagsan ee jirka jirka.
Raw Proviron (Mesterolone) Qiyaasta
Mesterolone, steroid anabolic afka ugu fiican, waxaa loo adeegsadaa laba siyaabood oo kala duwan; ujeeddooyin caafimaad si loo daaweeyo jirrooyinka qaarkood iyo jir dhiska. Faa'iidooyinka Proviron way badan yihiin laakiin waxaa lagu raaxeysan karaa oo keliya marka qiyaasta saxda ah la qaato. Qiyaasta lagu taliyay ee ujeeddo kasta looga doodi doono hoos.
Kiniin 25mg ah waa in la qaataa saddex jeer maalintii si loo daaweeyo awoodda iyo hoos u dhigista sifooyinka galmada ee ragga. Wadarta qiyaasta qiyaasta waa in ay ahaataa 75mg maalintii. Qiyaastan waxaa la qaataa marxaladaha hore ee daaweynta. Qiyaasta waxay hoos u dhigtaa 25 mg oo kiniin ah hal mar maalintii iyo wakhti. Qiyaasta Proviron ee la mid ah ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhalmo la'aanta ragga. Daawooyinka kale waxaa loo isticmaalaa Proviron si loo gaaro natiijooyinka ugu fiican.
Waxqabadka kor u qaada waxqabadka jirka waxay isticmaalaan qiyaasta 50mg ilaa 150mg maalin kasta. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, nolosha Proviron badhkeed waxay u dhaxeysaa 12 illaa 13 saacadood. Ujeedada asaasiga ah ee qaddarkan ayaa ah in la yareeyo heerarka haynta biyaha, inta badanna ay keento estrogen. Sidoo kale, qaddarkani wuxuu hubiyaa in heerka testosterone ee nidaamka jirka uu yahay sidii loogu baahnaa si looga hortago fursado kasta oo madhalaysnimo ka dib wareegga. Xaaladaha badankood, ragga ayaa isticmaali doona 100mg maalintii oo ah qiyaasta ugu yar. Si kastaba ha noqotee, labadaba 150mg iyo 100mg qiyaasta maalinlaha ah waxay si aad ah ugu faa'iideysan doonaan si isku mid ah. Maamulka qiyaasta daawada ee 'Proviron' ayaa sida caadiga ah socata sideed ilaa laba iyo toban toddobaad. Si looga adkaado dhibic dhejis ah oo inta badan dhacda toddobaadyada ugu dambeeya ee wareegga, koorso lix toddobaad ah Proviron ayaa shaqeyn doonta sixirka.
Dumarka isticmaala ee ku hawlan isboortiga xoogga leh waxay isticmaalaan Proviron. Si kastaba ha noqotee, adeegsiga haweenku aad ayey u niyad jabsan tahay. Haddii haweeney ay go'aansato inay isticmaasho, qiyaasta 25mg maalintii waa inay ku filnaataa kor u qaadista muuqaalka murqaha. Qaadashadu waa inaysan ka badnaan afar illaa shan toddobaad haddii kale isticmaaluhu wuxuu la kulmi doonaa waxyeellooyin dhinaca tallaalka ah. Proviron iyo uurku isma waafaqsana. Hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waa inay ka fogaadaan daawadan.
Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho Proviron, inaad ku dhejiso steroids kale waxay kaa fiicnaan doontaa waxyeello. Dadka Mesterolone sidoo kale waxay raadiyaan Winstrol, Androlic, Primobolan, Anavar iyo Masteron, kuwaas oo si fiican ula shaqeeya daroogada inta lagu jiro goynta wareegyada. Waxay kor u qaaddaa istrogen-ka ee steroids ee loo isticmaalo isku-darka si loo siiyo jirka adag ee la doonayo. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ku dari kara wareegga wareejinta haddii ay u muuqato inay faa'iido u tahay iyaga.
Dakhliga dheeraadka ah ee Proviron
Warbixinnada ilaa hadda maaha waxyeellooyinka soo noqnoqda ee ay sababaan ba'an xad-dhaaf ah oo ka yimaada sterioid Proviron intii lagu guda jiro wareegyada ama markaad orodo amesterolone PCT. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka aan xadidneyn ee asrogens waxay la socotaa saameyn xun sida cudurrada wadnaha, fayruska, xannuunada maskaxda, ginecomastia, dhibaatooyinka beerka, dulqaadka sonkortu hoos u dhacdo, dhaawaca maskaxda, cilladda ka bixida, xaaladaha cudurka hypogonadal iyo dhiig-baxa caloosha. Qiimaynta rugta caafimaad waa in loo sameeyaa shakhsiyaadka si loo go'aamiyo daaweynta astaamaha loo isticmaalo. Isticmaalayaashu waa inay leeyihiin aqoon ku filan goorta la qaato Proviron iyo qiyaasta loo qoondeeyey si loo ilaaliyo xad-dhaafka.
Raw Proviron (mesterolone) wareeg ah
Iyadoo la tixgelinayo in Proviron aysan ahayn steroid anabolic, ama halkii ay leedahay sifooyinka anabolic ee jilicsan, ma ahan mid lagu kalsoon yahay. Taa baddalkeeda, waxaa loo isticmaalaa daawooyinka kale ee anabolic, sida daroogada kale, si loo yareeyo saameynta estrogenic ee jirka. Waxaa intaa dheer, waxaa lagu daraa xayawaan loogu talagalay saameynta anti-ootrogen iyo saameynta daaweynta astamaha leh ee kor u qaadaya jirdhis adag. Ahaanshaha xannibaad xoog leh ayaa sidoo kale ah sabab u ah kuwa jidhka jilicsan jecel.
Jir dhisayaasha ragga iyo ciyaartooyda u adeegsada Proviron sida xarun isku dhafan waxay qaataan qiyaasta 50mg ilaa 100mg maalin kasta inta lagu jiro muddada wareegga. Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan wax xaddidaad ah waqtiga la qaadanayo. Proviron PCT sidoo kale wuxuu u shaqeyn karaa qaar ka mid ah kuwa jirka dhisa. Waxay sidaas u yeelaan si loo yareeyo heerarka estrogen iyo hagaajinta taranka. Maaddaama aysan tani ahayn go'aan xun, waxaa jira daawooyin kale oo wax ku ool ah oo leh saameyn xoog leh oo loo isticmaali karo inta lagu jiro PCT sida Nolvadex. Proviron waa in laga fogaadaa dhammaan kharashyada haddii ay jirto halista xakameynta wax soo saarka testosterone ee jirka.
Wareegyada hoos ku xusan waa inay ku siiyaan tilmaamo ah waxa laga filayo.
Raw Proviron (mesterolone) wareega 1
Week Proviron Dianabol
1 50mg maalintii 40mg maalintii
2 50mg maalintii 40mg maalintii
3 50mg maalintii 40mg maalintii
4 50mg maalintii 40mg maalintii
5 50mg maalintii 40mg maalintii
6 50mg maalintii 40mg maalintii
7 50mg maalintii 40mg maalintii
8 50mg maalintii 40mg maalintii
Raw Proviron (mesterolone) wareega 2
Week Proviron Anavar
1 40mg / maalin 40mg / maalin
2 40mg / maalin 60mg / maalin
3 60mg / maalin 80mg / maalin
4 60mg / maalin 80mg / maalin
5 60mg / maalin 80mg / maalin
Raw Proviron(mesterolone) Saamaynta Dhinacyada
Proviron waa steroid-ka ugu nabdoon marka la barbar dhigo steroids kale ee anabolic iyo androgenic. Bodybuilders waxay isticmaali karaan steroidkan waxayna ku raaxaysan karaan faa'iidooyinkeeda iyaga oo aan la tacaalin waxyeellooyin aan loo dulqaadan karin. Waxoogaa waxyeelo ah ayaa laga yaabaa in la soo maro, laakiin suurtogalnimada ayaa ah mid hoose. Proviron haweenka laguma talinayo mar haddii heerarka fayrisku ay sarreeyaan ka dib isticmaalka. Dhibaatooyinka soo raaca ee mesterolone ayaa hoos looga wada hadlay.
Dhibaatooyinka guud ee is-daba-marinta waxaa ka mid
Heerarka tamarta sare ama hooseeya
Dareemida galmada oo kacsan
Kordhay size size
Dhibaatooyinka lidka ku ah jeermisyada;
Cabbirada qanjirka 'prostate'
Dhibaatooyinkan 'Proviron' xitaa way ka sii xumaan karaan haddii isticmaalaha uu qaato mesterolone wasakhaysan ama uu maamulo qiyaaso xad dhaaf ah. Si looga fogaado halistaan, isticmaaleyaashu waa inay ogaadaan goorta ay qaadaneyso Proviron iyo xaddiga saxda ah.
Proviron ma sharci baa?
Xeerarka, sharciyada iyo qawaaniinta la xiriira steroids waxay ku kala duwan yihiin gobolada iyo wadamada. Sida ugu badan ee mesterolone (Proviron) maahan, cilmi ahaan, steroid dhiska sababo la xiriira saameynteeda ugu yar ee anabolic, waxaa loo tixgeliyaa loona diiwaan galiyaa sida loo yaqaan 'anabolic steroid' wadamada qaar sidaas sharciyeysan. Proviron waxay caan ku tahay sadex dal oo reer Galbeed ah; Mareykanka, Ingiriiska iyo Kanada.
Waddanka Mareykanka, Raw mesterolone wuxuu ku qoran yahay walxaha Jadwalka 111 ee hoos yimaada Sharciga Maandooriyaha La Xakameeyay. Xaaladdan oo kale, waa sharci darro in la haysto ama xitaa loo isticmaalo Proviron gobolkan. Soo dejinta, iibsiga ama ka ganacsiga dadka steroids dhiska ah, Proviron ayaa ka mid ah, waxaa loo arkaa fal dambiyeed.
Boqortooyada Midowday (England), Proviron waxaa loo tixgeliyaa daroogada Schedule IV. Haysashada iyo isticmaalka Proviron baahida shakhsi ahaaneed ayaa sidaas darteed sharci ahaan dalkaas. Soo dejinta steroidkan sidoo kale ma aha dembi muwaadiniinta UK.
Kanada gudaheeda, Proviron waxay ka diiwaan gashan tahay Jadwalka IV, sida UK oo kale. Tan macnaheedu waa kaliya lahaanshaha iyo iibsashada dhismahan waa sharci. Ka ganacsiga dadka deegaanka waa mamnuuc waxaana loo arkaa dambi weyn. Kuwa lagu qabtay ka ganacsiga Proviron waxay bixiyaan ganaax $ 1000 iyo / ama lix bilood oo xarig ah dambiga koowaad. Kuwa gala dambiyada dambe waxay bixiyaan ganaax dhan $ 2000 iyo / ama hal sano oo xarig ah. Xeerarkan waxaa lagu sheegay Sharciga Maandooriyaha iyo Maandooriyaha La Xakameeyay ee Kanada (CDSA).
Mesterolone iibka online
Habka ugu fudud uguna raqiisan ee lagu iibsan karo proviron waa intarneetka marka loo eego isticmaalayaasha badankood. Iibka ganacsatada maxalliga ah ayaa kugu kici doonta wax badan. Qaar badan oo ka mid ah ganacsatada jimicsiga ayaan qaadan dawada ama ma haystaan ​​tiro yar. Badi alaab-qeybiyeyaasha khadka tooska ah waxay leeyihiin Proviron ama nooc ka mid ah tiro badan. Fursadaha aad kula kulanto internetka been abuurka ah ayaa aad u sarreeya gaar ahaan haddii aad raadinayso sumad guud oo dhulka hoostiisa ah. Si kastaba ha ahaatee, tani maahan inay dhacdo haddii aad wax ka hubiso asalka alaab-qeybiyahaaga. Iyada oo tiro badan oo sharci ah oo Schering Proviron ah suuqa, ma jiri doonto sabab kasta oo lagu iibsado sumad guud.
( 13 14 ) ↗
Gadiidka Proviron Online wuxuu u muuqan karaa inuu yahay habka ugu fudud ee lagu iibsado daroogada, laakiin waxaa jira khataro ku lug leh. Tan iyo Proviron waa daroogo III ah ee Maraykanka, iibsashada online wuxuu jabin doonaa sharciga. Tani waxay la socotaa ganaaxyo waaweyn ama xitaa xabsi. Isticmaalayaasha ayaa si sharci ah u iibsan kara daroogada kaliya haddii ay haystaan ​​warqad dhakhtar. Taas oo ay tahay in warqadda rijeetaytarku ay tahay mid caafimaad ahaan loo ansixiyay, oo caddaynaysa oo ay yaqaanaan dawladda. Dalalka qaarkood waxay leeyihiin sharciyo la mid ah, inkastoo Maraykanku xoogaa adag ku yahay sharciyada. Wadamada kale waa kuwo aad u adag laakiin aad u adag oo ka horjoogsanaya iibinta online ee steroids anabolic. Sida ugu badan ee Proviron tahay steroid ugu badbaado, FDA ma aysan sharciyeynin adeegsigeeda Maraykanka.
Sida loo iibsado Proviron
Proviron maaha mid aad ugu baahsan suuqa marka la barbardhigo aabayaasha kale, steroids dhiska ama xeryahooda. Si kastaba ha noqotee waxaa loo tixgeliyaa inay tahay xarun muhiim ah oo si fudud looga heli karo suuqa. Tirada ugu badan ee mesterolone ceyriin waxaa soo saaray daawada Schering. Dabeecadda iyo qaabdhismeedka Proviron darteed, way adag tahay in la soo saaro been abuur. Tan macnaheedu maaha in adeegsadayaashu aysan taxaddarin markay wax iibsanayaan. Maaha mid walba Proviron iibinta Xayeesiinta waa in lagu kalsoonaado.
Marka laga reebo alaabooyinka ay soo saaraan shirkadaha dawooyinka, waxaa jira kuwa lagu soo saaro shaybaarrada dhulka hoostiisa. Shaybaarada dhulka hoostiisa looma oggola, la kormeero ama xitaa liisan. Muddada gaaban, waxay ku shaqeeyaan sharci darro. Proviron SARM waa mid ka mid ah xeryahooda ay soo saaraan shaybaarro waaweyn oo dhulka hoostiisa ah oo ay yaqaanaan dad badan. Shaybaarrada yaryar ee dhulka hoostiisa ah ma samaysan karaan dhismahan maadaama aysan aheyn mid aad u caan ah. Taa bedelkeed, waxay doortaan inay soo saaraan sterids-ka caanaha kale iyo qalabka isgaarsiinta.
Guud ahaan, Proviron maaha mid aad qaali u ah, illaa xadna, si fudud ayaa loo heli karaa. Iibsashada shirkadaha dawooyinka ayaa xoogaa ka qaalisan iibsiga alaab-qeybiyeyaasha dhulka hoostiisa ah. Tani waa, si kastaba ha noqotee, kiiska dhammaan sheybaarada dhulka hoostiisa mara (UGL) iyo alaabada ay soo saaraan dawooyinka. Tusaale ahaan, Schering wuxuu ku iibiyaa 25mg Proviron $ 0.83; Shirkadaha kale ee dawooyinka waxay ku iibiyaan $ 0.75. Shaybaarka dhulka hoostiisa (UGL); dhinaca kale, iibiso 25mg Proviron for $ 0.50.also, shaybaarrada dhulka hoostiisa ayaa laga yaabaa in mararka qaarkood wax soo saarku ku badan yahay diirada kala duwan sida 100mg, 50mg, 25mg ama xataa 20mg. Tayada qalabka waxsoosaarka ee ugu hooseeya waa shey la isweydiiyaa marka la barbardhigo sicirka alaabta daawooyinka ma aha macquul.
Helitaanka qalab la isku halleyn karo oo iibiya Proviron sharci ah ayaa mararka qaarkood u noqon kara hawl adag. Proviron iib ah ama mesterolone iibka xayeysiinta ayaa ku baahsan internetka. Isticmaalayaashu waa inaysan iibsan wax shey ah iyadoon baaritaan rasmi ah lagu sameynin alaab-qeybiyaha. Si kastaba ha noqotee, waxaad si fudud uga iibsan kartaa Proviron khadka tooska ah suuqyadeena. At Steroid.com, waxaan ku siineynaa anabolics sharci ah oo si sharci ah lagu helay iyada oo aan dhakhtar qorin. Qiimaheena waa kuwo la awoodi karo oo u dhigma tayada wax soo saarkeena. Waxaad dareemi doontaa xasilooni markaad naga iibsaneyso Proviron tan iyo markii aan wadno ganacsi hufan oo sharci ah. Dadka Mesterolone sidoo kale waxay raadiyaan steroids kale oo anabolic ah, oo aan si sharci ah u siino.
Dib u eegista Proviron
Proviron ma noqon karto mid awood badan sida steroids kale, laakiin faa'iidooyinkiisa waa la ogaan karaa dhamaadka wareegyada. Waxaan ku isticmaalay wareegtadayda goynta iyo markaan isku diyaarinayo tartan. Ilaa hadda wax waliba way fiicnaayeen, wax cabasho ahna ma jiraan. Kahor intaanan ogaan steroidkaan, waxaan qabay arrimo la xiriira heerarka testosterone ee jirkeyga xitaa waxaan ku qasbanahay inaan qaato qiyaaso badan oo testosterone ah. Hadda oo aan ku daray Proviron Bayer xidhmooyinkayga, waxaan isticmaalaa oo keliya tiro yar oo ah testosterone endogenous testosterone mararka qaarkoodna midkoodna. Waan jeclahay xaqiiqda ah in steroidkani iga caawiyo inaan sii wado muruqyada caatada ah ee ku soo kordha wareegyada wareegyada. In badan oo jir-dhiseyaal badani iska indho-tiraan saamaynteeda, ma joojin karo inaan ku daro iskudayga. Steroidkani wuxuu kafiican yahay SARM-yada kale ee aan horey u isticmaali jiray. Xaqiiqdii, waa inaan la tacaali karaa madax xanuun daran hal mar. Niyadayda iyo dareenkayga fayoobaanta ayaa si weyn u fiicnaaday.
Muxuu Proviron sameeyaa? Dadka badankood waxay u maleynayaan in proviron (1424-00-6) uu yahay steroid daciif ah. Waxay u badan tahay maadaama aysan fahmin hoormoonka ama aysan u isticmaalin sida saxda ah, waxaa laga yaabaa inaadan arkin isbadal sixir isla marka aad wareegeyso steroidkaan, laakiin saameyntiisa waa gaabis laakiin waa hubaal; gaar ahaan marka wareegyada bulking. Waa mid gaar ah oo gaar ah maaddaama dadka isticmaala aysan la kulmin waxyeellooyin aan fiicnayn oo soo maray markii la isticmaalayo steroids kale. Helitaanka masterone (Proviron) sharci ahaan iyada oo aan dhakhtar qorin sidoo kale waa suurtagal. Iibsadayaashu waxay ka heli karaan Steroid.com qiimo jaban oo jeeb ah.
1 alpha-mythyl-17 beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-mid
Caanaha nafaqada ee sayniska: C2OH3202
Miisaanka loo yaqaan 'molecule molecule': 304.4716
Soo saaraha daawada: Schering
Maqnaanshaha maaddooyinka molecule: Looma hirgelin karo
Saacadaha nool ee Proviron: Saacadaha 12-13
Taariikhda la sii daayay: 1960
Qiyaasaha lagu taliyey: 25mgs ilaa 200mgs maalin kasta
Isreogenic / Heerka Anabolic: 30-40: 100-150
Waqtiga Qaadashada: shan ilaa lix toddobaad
Sawirrada Natiijooyinka Proviny
AJ, SL, & AA, OA (2009). Mesterolone (Proviron) waxay soo saartaa tayada shahwada oo hooseysa iyadoo hoos loo dhigayo astaanta hormoonka galmada ee ragga qaangaarka ah ee 'Sprague Dawley rat testis'. Cilmi-baaris cilmi-baaris iyo qoritaan, 4(4), 320-327.
Streams, MA, & Content, U. UK Murqaha Madasha Dhismaha.
Casquero, AC, Berti, JA, Teixeira, LLS, & de Oliveira, HCF (2017). Jimicsiga Joogtada ah wuxuu yareeyaa CETP iyo Daaweynta Mesterolone waxay kahortagaan Faa'iidooyinka Jimicsiga ee Profile Plasma Profile: Daraasado ku saabsan Jiirka Transgenic. Lipids, 52(12), 981-990.
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee budada Raw Proviron (Mesterolone) kaas oo leh shaybaar madaxbannaan iyo warshad weyn oo taageero ah, dhammaan wax soo saarka waxaa lagu fulin doonaa nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo. Nidaamka sahaydu waa mid deggan, labadaba tafaariiqda iyo dalabaadka jumlada waa la aqbali karaa. Ku soo dhawow si aad u ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan AASraw!
1 jecel yahay
Kaabka Kobciyaha Murqaha ugu Badbaadsan: Urolithin A (UA) Budada
Top 15 Winstrol Waxtarrada Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Inta Aan Laga Helin Winstrol Online Root Isotretinoin (Accutane) ee finanka: Daweynta finanka leh Isotretinoin